Ejiji - Imewe Mmewe
Akpa Aka, Akpa Mgbede
Mbọsị Ụka 5 Disemba 2021
Akpa Aka, Akpa Mgbede Akwụkwọ Tango bụ obere akpa nwere ezigbo ọhụụ. Ọ bụ uwe a na-ahụ ike na-achapu agbatị nke ọ na-enye gị ohere ịnwe aka gị n'efu. N'ime bụ ohere zuru oke na ịmegharị oghere ndọta magnet na-enye oghere dị mfe na oghere na-atụghị anya ya. A na-eji obere akpa akpụkpọ anụ mee akpụkpọ anụ ahụ maka akpụkpọ anụ dị nro maka ntinye aka dị mma na ntinye aka na ntagide, na-ama ụma na-arụ ọrụ karịa nke a na-eji akpụkpọ anụ akpọrọ glazed.
Kootu Nwere Ike Ịgbanwe Agbanwe
Satọdee 4 Disemba 2021
Kootu Nwere Ike Ịgbanwe Agbanwe Uwe nwere ike ịbụ 7-na-1 sitere n'ike mmụọ nsọ ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ ike na-ahọrọ maka uwe pụrụ iche, nke obibi na arụ ọrụ kwa ụbọchị. N'ime ya ụdị uwe ochie mgbe mgbe, Scandinavian Rya Rug akwa nwere aka na-akọwagharị n'ụzọ ọhụụ nke na-ebute uwe dabara adaba na-adị ka furs n'ihe gbasara arụmọrụ ha. Ihe dị iche na nkọwa zuru oke na omume enyi na gburugburu ebe obibi. N'ime ọtụtụ afọ ka anwalewo Eco Furs na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche nke Europe nke nyere aka n'ịzụlite àgwà nke uwe a na mpempe ndị ọzọ na-adịbeghị anya na izu okè.
Fraịdee 3 Disemba 2021
Uwe Na Vietnam, anyị na-ahụ usoro achara achara na ọtụtụ ngwaahịa dị ka ụgbọ mmiri, arịa ụlọ, nkịta ọkụkọ, ọkụ na-acha ọkụ ... Bamboo lattice siri ike, enweghị ọnụ, ma dị mfe ịme. Ọhụụ m bụ ịmepụta ụdị ejiji eji eme njem mara mma nke na-atọ ụtọ ma mara mma, ọkaibe ma maa mma. Etinyerela m akwa achara achara ụfọdụ nke fashions m site n'ịtụgharị lattice dị larịị, nke siri ike ka ọ bụrụ ihe dị nro. Ihe ngosi m jikọtara ọdịnala na ụdị ọgbara ọhụrụ, ekweghị ekwe nke ụkpụrụ lattice na aja dị nro nke akwa. Ihe m na-elekwasị anya bụ n'ụdị na nkọwapụta, na-ewetara onye na-ekiri amara na nwanyị.
Tọọzdee 2 Disemba 2021
Mgbanaka Diamond Isida bụ mgbaaka ọla edo nke 14K na-agbatị na mkpịsị aka gị iji mepụta anya mara mma. A na-eji ihe ịchọ mma dịka diamonds, amethysts, citrines, tsavorite, topaz ma kpuchie ya na ọla edo na-acha ọcha na odo. Na ibe ọ bụla nwere ihe nke aka ya akọwapụtara, na-eme ya ka ọ bụrụ otu ụdị. Na mgbakwunye, uhere dị larịị dị ka nke dị na gemstones nke nwere iberibe ọkụ na-egosipụta ụzarị ọkụ dị iche iche na ebe obibi dị iche iche, na-agbakwunye agwa pụrụ iche na mgbanaka ahụ.
Wenezdee 1 Disemba 2021
Olu Akwa Nhazi ahụ nwere akụkọ na-egbu mgbu dị egwu n’azụ ya. O sitere n’uche m nke na-enweghị mmechuihu n’arụ m nke ihe oku siri ike gbara n’ọkụ mgbe m dị afọ iri na abụọ. Mgbe o kpuchitere ya na iji egbugbu kpuchie ya, onye na-anuta ya dọrọ m aka ná ntị na ọ ga-aka njọ ikpuchi ụjọ ahụ. Onye ọ bụla nwere ọnya ha, onye ọ bụla nwere akụkọ na-agaghị echefu echefu ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme ya, ụzọ kachasị mma maka ọgwụgwọ bụ ịmụ otu esi eche ihu ya ma merie ya nke ọma karịa ikpuchi ma ọ bụ ịnwa ịgbanahụ ya. Ya mere, enwere m olile anya na ndị na-eyi akwa m nwere ike ịfụ ike ma nwee ezigbo mma.
Tiuzdee 30 Novemba 2021
Jikọtara Elekere COOKOO ™, smartwatch mbụ nke ụwa nke jikọtara ngagharị analog na ngosipụta dijitalụ. N'iji ihe ngosiputa ihe omuma ya mee nke oma ya nke oma na ihe nlere anya nke oma, ihe nlere na egosiputa ihe ngosi ka amata site na ama ama gi. Ekelere ndị ọrụ COOKOO App ™ na-ejikwa ndụ ha ejikọtara ọnụ site na ịhọrọ ozi na ozi na ha chọrọ ịnata ikike na aka ha. Ingpị bọtịnụ COMMAND nke enwere ike ịgbanwe ga-eme ka igwefoto kpalite igwefoto, ọkpụkpọ egwu njikwa egwu, otu bọtịnụ Facebook na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ.
Akpa Aka, Akpa Mgbede Kootu Nwere Ike Ịgbanwe Agbanwe Uwe Mgbanaka Diamond Olu Akwa Jikọtara Elekere